R.W Soomaaliya Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Baaqna U Diray Ha’adaha Gargaarka Inay Gacan Siiyaan Dadkii Ku Wax Yeeloobay Fatahaada Wabiga Shabelle
Mogadishu Axad 30 September 2012 SMC
R.W Soomaaliya Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Baaqna U Diray Ha’adaha Gargaarka Inay Gacan Siiyaan Dadkii Ku Wax Yeeloobay Fatahaada Wabiga Shabelle.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka soo qayb galay shirkii QM ee magaalada New York iyo Shirar gooni gooni ah oo uu la yeeshay qaar ka tirsan Madaxda Caalamka.
Waxaana Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Golaha Wasiiradda, Xildhibaano, Saraakiisha, Dhalinyaro, Haween iyo dadweyne aad u fara badan.
Ra’iisul wasaaraha ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde kula hadlay Warbaahinta wuxuuna ka warbixiyay Shirarkii uu ka soo qeybgalay.
“Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aniga iyo Waftigii aan horkacayay dib ugu soo laabano dalka gaar ahaan Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaana ku maqneyn oo aan ka qeyb galney Shirkii QM ee looga hadlayay Arrimaha Soomaaliya iyo Shirar kale oo aan gooni gooni kuwada qaadanay qaar ka tirsan Madaxda Caalamka. Waxaana ka wada hadalney Isbedelka Siyaasadeed ee Soomaaliya waxayna noo sheegeeno sida ay diyaarka ula yihiin iney garab istaagaan Dowladda Cusub ee Soomaaliya, Waxeyna sidoo kale soo dhaweeyeen Madaxweyne Prof Xasan Sheekh Maxamuud iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya”.
Wuxuuna sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha u hambalyeeyay Ciidamada qaranka iyo kuwa AMISOM guulihii ay ka gaareen Magaalada Kismaayo iyo sida wanaagsan ay u badbaadiyeen Shacabka reer Kismaayo.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa tacsi u diray dadkii ku geeriyooday Fatahaada Wabiga Shabelle taas oo ay ka dhasheen khasaarooyin badan waxana uu sheegay in dowlada Soomaaliya ay kaalmooyin deg deg ah gaarsiin doonto magaalada Baladweyn, wuxuu sidoo kale baaq u diray Hay’adaha Gargaarka inay gacan ka gaystaan masiibada ku habsatay deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan..